Scout: Sevhisi yekutumira Maposadhi emadhora 1 Imwe neimwe | Martech Zone
Scout ibasa rakareruka rinoita chinhu chimwe - rinokutendera kuti utumire 4 × 6, akazara-mavara maposadhi akagadziridzwa newe. Iwe unopa yako yepamberi neyekuseri mifananidzo, unopa runyorwa rwema kero (tinogona kukubatsira iwe kuti uivake kana iwe unogona kuzviita iwe pachako), uye ivo vanodhinda yakanaka postcard uye vozotumira iyo kune chero nhamba yevatengi vako kana vatengi $ 1.00 imwe neimwe.
Mashandiro anoita Scout
Wedzera Mifananidzo - Shandisa matemplate avo kana kurodha JPG, PNG kana PDF uye chikuva chavo chinozoisimbisa.
Pinda Kero - Isa faira reCSV remazita evagashiri nekero uye ivo vanozodhinda vozvitumira kune chero kupi muUSA.
Bhadhara uye Tumira - Pinda yako kiredhiti kadhi, ona kufanoonwa kwemakadhi ako epositi, uye ivo vanozotumira odha yako kune vamwe vavo kuti vapurinte nekutumira.
Sezvo mabhokisi emabhokisi ari kuramba achivhara pamwe nemamwe emaimeri, tsamba dzetsika dzakananga dziri kudzoka. Ini ndinowana pakati pezana nemazana maviri emaimeri zuva rega rega… asi ini kashoma kuti ndiwane zvinopfuura zvidimbu zvematsamba Kadhi rekuposita rinobatsirawo nekuti hapana chinhu chekuti muridzi avhure - ingoisa meseji yako, dhizaini yakanaka, uye yakasimba yekudaidzira-kuita-kadhi rako.
Uye zvechokwadi, usakanganwa kuisa yako webhu kero, email kero uye kunyange magariro masocial link. Ita kuti zvive nyore kuti vanhu vabatanidze kwauri!
Tumira Yako Yekutanga Kadhi
Tags: mail yakanangatsambanopostcardsscouttumira mapositi